Kumuu Ahaa Xiddigii Barcelona Ee Oohin Qabsaday, Lana Aamusiin Kari Waayey Markii Uu Lionel Messi Ka Tegay Kooxdaas? - GOOL24.NET
Kumuu Ahaa Xiddigii Barcelona Ee Oohin Qabsaday, Lana Aamusiin Kari Waayey Markii Uu Lionel Messi Ka Tegay Kooxdaas?
Lionel Messi ayaa xagaagii hore ka tegay kooxda reer Barcelona oo ku wargelisay in aanay u cusboonaysiinayn qandaraaskiisa, taasina waxay keentay inuu soo afjaro muddo 21 sannadood ah oo uu xidhnaa shaadhka kooxdan iyadoo uu si xor ah ugu wareegay PSG.
Laacibkan toddobada jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa kusoo laabtay Barcelona markii uu xulka qarankiisa kula soo guuleystay Copa America, si uu u saxeexo heshiis cusub oo cimrigiisa oo dhan kusii hayana Camp Nou, hase yeeshee Juan Laporta ayaa u sheegay in aanay awoodi karayn inay mushaharkiisa bixiyaan, go’aana ay ku gaadheen in aanay heshiis dambe la gelin.
Kaddib maalmo adag oo uu joogay magaalada, Lionel Messi ayaa loo abaabulay madal macasalaamayn ah oo uu kula hadlo ciyaartoyda, shaqaalah tababarka iyo taageereyaasha, waxaana uu ka baxay kooxda isaga oo ooyaya oo ilmada xajisan kari la’.
Ciyaartoyda Barcelona ayaa iyagana ay qaarkood ooyeen markii ay arkeen kabtankooda oo murugaysan oo ooyaya, waxaase ay arrintani si gaar ah u taabatay ciyaartoy lama filaan ah oo ruug-caddaa ah, kaas oo lagu eedaynayay in uu dabada ka riixayay in Messi loo diido heshiis cusub.
Gerard Pique oo ay kulliyadda La Masia kasoo wada baxeen Lionel Messi ayaa sheegay in uu oyayay markii uu Lionel Messi ka tegay Barcelona, waxaanu yidhi: “Waan ooyay markii uu Messi ka tegay Barcelona. Isaga dartii ayaan u ooyay. Marka aan eego waayihiisii Barca, waxa aan jeclaan lahaa in uu xirfaddiisa ku dhamaysto kooxda.
“Waan fahamsanahay sababta Messi aanu u cusboonaysiin qandaraaskiisa. Kooxda ayaa ka cabanaysay dhaqaale xumo sababtuna waxay ahayd sidii uu kooxda u maamulay madaxweynihii hore.
“Laakiin ugu dambaynta, waxyaabahan oo kale way iska dhacaan nolosha. Mararka qaarkood waxay aad gaadhaysaa go’aan, sida aad wax u doonaysana kuuguma shaqaynayaan.
“Barcelona iyo taageereyaasha waxa uu Messi u ahaa Boqor, way fiicnaan lahayd haddii uu sii joogi lahaa.”